Nampiseho ny soritr’aretina, ary tena mampiahiahy ho mitondra ny soritr’aretina izy io, hoy ny mpitsabo. Izy rahateo avy any Toamasina, ka nandray fanapahan-kevitra ny tompon’andraikitra ara-pahasalamana hanokana azy. Efa natao ny fitiliana, ka miandry ny valiny amin’izao fotoana izao. Nalefa tany Moramanga omaly maraina ny singa taminy hatao fitiliana hampiarahana an’ireo tranga mampiahiahy halefa hotiliana. Mbola tsy voamarina tanteraka ho voa izy, fa miandry an’izay valin’ny fitiliana izay.